I-Sugar kunye neentambo ze-Easter ze-eggnamice ziyi-fun craft idea, kunye kunye unokuquka ininzi yesayensi kule projekthi. Unokwenza imihlobiso encinci yechungechunge engagqibekanga ukuxhoma okanye ukufaka kwiibhasikiti okanye unokwenza iqanda elikhulu le-crystal ukusebenzisa njengebhasikidi ye-Easter.
I-Sugar ne-String Easter Egg Materials
Kukho iindlela ezimbalwa ezahlukeneyo zokwenza le projekthi. Unokwenza amaqanda amancinci okanye amaqanda amakhulu kakhulu. Amaqanda amakhulu afuna iindidi ezininzi zeshukela ukuze axhaswe ubukhulu bawo.
Amaqanda amancinci angenziwa njengokuba avulekile, abhenca umboniso okhangelekayo. Ukuba ukhathazekile ukuba ushukela uya kutsalela izintuthwane, kukho iindlela ezimbini zokuphepha le ngxaki. Omnye ukupakisha iphrojekthi ezalisiweyo ngepayipi ecacileyo. Elinye ukuguqula izithako ngokupheleleyo, usebenzisa umxube we-starch okanye i-glue kunye namanzi esikhundleni seswekile kunye namaqanda abamhlophe okanye amanzi. Ukuba usebenzisa iglue kunokuba ushukela iphrojekthi yakho ayiyi kuba nzima okanye inqabileyo, kunye kwaye awuyi kufumana i-crystals.
Iibhaluni: Sebenzisa iibhaluni ezincinci ukuba ufuna ukwenza amaqanda amancinci ongayifaka kwiibhasikiti ze-Easter okanye uzibambe njengemihlobiso. Sebenzisa iibhaluni ezinkulu xa ufuna ukusebenzisa iqanda njengebhasikidi ye-Easter okanye njengomhlobiso omkhulu
Umgca: Ungasebenzisa nayiphi na intambo yomtya oyifunayo, njengento yokugcoba i-floss, intambo, intambo, okanye i-ribbon.
Ushukela: Ushukela omhlophe osemhlophe (sucrose) uvelisa i- crystals ephezulu kakhulu kwaye ikhulu . Ungasebenzisa i-confectioners okanye ushukela ocoliweyo.
Amaqanda abamhlophe okanye amanzi: Amaqanda abamhlophe anamanzi kunye neprotini ye-albin. I-albinin ikunceda ukuba ufumane iqela elincinci, i-glossier ye-Easter, kodwa ungasebenzisa amanzi endaweni yeziphumo ezifananisiweyo.
Yenza i-Easter Egg
Imiyalelo eyintloko kufuneka uqhube ibhaluni kude kube bukhulu obufunayo ngeqanda lakho lePasika.
Emva koko, yenza ibhaluni inamathele ngokuyiphatha ngamanzi ashukela. Ukubopha umtya ngeenxa zonke uze ujikeleze ibhaluni uze ube nomtya owaneleyo ukuxhasa umlo (ngaphezulu kungcono). Vumela umtya ume. Faka izicelo ezininzi zeeshukela, uvumela ibhaluni ukuba lome phakathi kwamacwecwe. Qaphela ngokukhawuleza ibhaluni uze uyisuse. Sebenzisa umtya weeshukela kwiqanda lePasika njengoko kukuthi okanye usike umgodi kuyo usebenzisa izikiti.
Nayi imiyalelo enenkcazo yeqanda lePasika elinamakhristalthi amakhulu kunye ne-aseta.
Hlanganisa ndawonye abamhlophe abamhlophe beqanda kunye noshukela olunjengoko kuthatha (malunga neekomityi ezintathu zeeshukela ezinomgubo, ushukela oluncinci elincinci) ukuze wenze i-glaze enamandla ngokwaneleyo ukusasazeka, kodwa ayiyi kuquba. Yongeza umbala wokutya xa unqwenela. Ukubambisana kubalulekile. Ukuba i-glaze iyaqhuma, iqanda liza kuthatha ixesha elide ukuba lime kwaye ngeke libe linzima kwaye linamandla. Isamba seswekile esiya kutshabalala kwiqanda elimhlophe ( ukutyunjwa kwamanzi ) kuxhomekeka kakhulu kwiqondo lokushisa. Ininzi ishukela iza kutshabalalisa kwigumbi lokushisa amaqanda abamhlophe kunamaqanda abamhlophe abamhlophe.
Vulela ibhaluni kwisayizi efunwayo. Uwubophe ngeqhina. Ukubopha intambo ejikeleze iqhina. Uza kusebenzisa lo mtya ukuxhoma ibhaluni ngelixa ludla.
Ingubo ibhaluni kunye noshukela kunye nomxube omhlophe weqanda.
Gquba ibhaluni ngentambo. Inokukunceda ukusebenzisa ubude obude beetambo kunokuba ugobe iqela elide.
Yibani ibhaluni uze uvumele umtya ume.
Ingubo ibhaluni kunye noshukela kunye nomxube omhlophe weqanda. Gcwalisa ikhefu phakathi kweemida kwaye uzame ukufumana ukufikelela.
Unokufuna ukongeza ezinye iingubo zeshukela. Ingubo yakho yokugqibela, ukhetho olulodwa kukufafaza iswekile kakhulu kwi-mix mix. Oku kuya kubangela iqanda elincinci kakhulu.
Xa unelisekile ngobunzima beqanda, vumela iiyure ezingama-24 ukuze iqanda lilukhuni. Phonon i ibhaluni ukwenzela ukuba iphosakele. Injongo yakho kukukhipha ibhaluni ngokukodwa ngaphakathi kweqanda. I- crystallization oyifumayo iya kuxhomekeka kwindlela iswekile echithwe ngayo kwiqanda elimhlophe kunye nezinga lokukhuphuka kwamanzi.
Ungasebenzisa iisisi ukusika imingxuma kwiqanda. Umngcipheko weqanda unokugutyungwa ngebhebhoni okanye ngokuqhwaba okanye nayiphi na into oyithandayo.
Vula ii-Eggs Eggs
Enye indlela yokwenza iqanda elumane lukhuni. Le yiprojekthi elula kwaye ekhawulezayo. Iqanda kufuneka libe yincinci kuba i-egg shape isugcinwe ngentambo elukhuni okanye ngentsimbi. Ungasebenzisa i-glaze echazwe kule nguqulelo yeprojekthi kwiqanda elikhulu ukuze wenze iifestile ezitshintshayo kwiqanda elikhudlwana, kodwa kuya kufuneka usebenzise iingubo ezininzi ze-glaze.
Vulela ibhaluni ukwenza iqanda elincinci.
Ukutshisa amanzi amancinci ade aphephe. Susa amanzi ekushiseni. Yenza ishukela uze ungayi kuphinda uchithe. Ukuba unalo ushukela okwaneleyo kule nkombululo, iqanda lakho aliyi kulukhuni, ngoko kungcono ukongeza ishukela kuze kube lula ukuba izikristali ziqale. Ukuba awusebenzisi umtya wemibala, ungathanda ukufaka umbala wokutya kwisisombululo seshukela.
Dampen ibhaluni kunye nesisombululo seswekile. Musa ukuzitshisa! Unako ukuvumela utywala lupholile ngaphantsi.
Gquba ibhaluni ngentambo. Sebenzisa umtya owaneleyo ukubonelela ngenkxaso eyaneleyo yomlo.
Ncitshiswa ngeqanda lika- Easter kwisisombululo okanye ufumane isisombululo phezu kweqanda ukuze wenze intambo ethile izaliswe ngokupheleleyo isisombululo seshukela.
Ukumisa iqanda ukusuka kwenye intambo kuze kubekho iqanda lome.
Qaphela ngokukhawuleza ibhaluni uze uyisuse.
Jabulela iqanda lakho lePasika ! Emva kweeholide, unako ukusindisa iqanda kulonyaka ozayo ngokuwufaka kwiphepha lephepha kunye nokulondoloza kwindawo eyomileyo.
I-10 ephezulu yeBolt Action Deer / i-Big Game Hunting Rifles
Indlela yokudibanisa "iKhommen" (ukuza)
10 Chicago Rappers Kufuneka Uyazi